Aka m Atiku gụọ akwụkwọ- Buhari - BBC News Ìgbò
Aka m Atiku gụọ akwụkwọ- Buhari
18 Eprel 2019
Aka m Atiku gụọ akwụkwọ-Buhari
Nkenke aha onyonyo Onyeisiala Buhari na Atiku Abubakar ga-akwata na ntuliaka onyeisiala na 2019
Onye ọkaiwu ma bụrụkwa onye na-eru n'okwu n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Goddie Uwazuruike ekwuola n'okwu gbasara aka onyeisiala Muhammadu Buhari na-ama Atiku n'ebe agụmakwụkwọ ha abụọ dị bụ akụkọ ajembele iji wepụ anya n'okwu dị mkpa gbasara ka ntuliaka 2019 siri gaa.
Onyeisiala Muhammadu Buhari mara Atiku Abubakar nke PDP aka n'ihu sị ka o wepụta asambodo akwụkwọ ndị ọ sị na ọ gụrụ dịka ọ na-ekwu na ya bụ Buhari ka Atiku n'ịgụakwụkwọ nakwa ịma nke ụbọchị na-akọ.
Atiku abụghị onye Naijiria - APC
Kagbuonu ma megharịa ntuliaka ọkwa onyeisiala - Atiku
Nke a na-eme dịka PDP na Atiku gbara Buhari akwụkwọ n'ụlọikpe na-ekwu ka a kagbuo mmeri Buhari na ntuliaka 2019 ma na-ekwu na Buhari enweghị asambodo sekọndrị dịka o siri tinye n'akwụkwọ.
Na mkparịtaụka ya na BBC nwere n'ekwenti, Uwazuruike kwuru na ," Ọ bụ ịgba egbe ọnụ" ka Buhari na-agba iji wepụ ndị mmadụ anya n'okwu dị mkpa a kpụ n'ọnụ.
"Atiku abịala kwuo na ọ bụ meriri na ntuliaka 2019, Ihe onye na-achị achị kwesịrị ikwu bụ 'mba, ọ bụ mụnwa bụ Buhari meriri.' ị gosikwa etu isi merie.
Uwazuruike onye bụ bu onyeisi Aka Ikenga gara n'ihu sị, "Mana ị bịa na-akọ ihe ndị ọzọ enwnweghị isi, ọ bụ ịmarụ ọnụ.
Ekwuo elu kwuo ala, ihe anyị chọrọ ịma bụ onye meriri na ntuliaka 2019."
Nke a bụ isiokwu ikpe a, ya ka ndị mmadụ na-atụanya.
Otu tanka bu mmanụ agbịdị tiwara gbaa ọkụ n'okporoụzọ Lagos n'Ibadan n'ehihie ụbọchị Tọzde.
Nkenke aha onyonyo Mmadụ abụọ regburu n'ime ọkụ a
Akụkọ na-ekwu na ndụ mmadụ abụọ efuola ha maka ọkụ a.
Onweghi onye nwụrụ n'ime ọkụ tanka agbara ọkụ na Legọs
Mmadụ 7 anwụọla n'ọkụ tanka gbara n'Anambra
A na-eche na ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ na ya bụ ọdachị mana amabeghi ezi ọnụọgụgụ ya.
Nkenke aha onyonyo Ụgbọ ndị ọkụ a metụtara n'okporoụzọ Legọs na Ibadan
Ndị mmadụ nọ ebe ihe mere kọwara na o teela aka ọkụ a na-agba tupu enyemaka erute ha nso.
Image copyright @BashirAhmed/Twitter
Onyeisiala Buhari etinyela aka n'akwụkwọ iwu ga-eme ka ndị ọrụ Naịjirịa bido ịnata puku naira iri atọ dịka ụgwọ opekatampe.
A na-atụ anya na ụgwọ ọhụrụ a ga-ebido ozugbo ozugbo n'ime ihe dịka ọnwa Mee.
Buhari ebinyela aka n'iwu #NotTooYoungToRun
Itinye ego n'ụgwọ ọnwa opekatampe ọ ga-ebute 'inflation'?
Cheta na otu dị icheiche na-agbagha ego ole ụgwọ opekatampe ga-abụ tupu e kweta na puku naira iri atọ.
Onyeisi ụlọomeiwu bụ Bukola Saraki tinyere ọnụ n'okwu a site n'akara Twitter ya.
Erela ihe karịrị ọkara na tiketi niile e dobere maka asọmpị iko mba ụwa ụmụnwaanyị ga-eme n'afọ 2019 a.
BBC ghọtara na asọmpị dị n'etiti Nigeria na Fransị so na ndị erechara ere. Ị ka na-eche gịnị?
Assest Declaration : Onnoghen ga-ama ebe ọ kwụ taa:
Onye bụbu ọkaikpe ukwu Naijiria bụ Walter Onnoghen ga-amata ebe ọ kwụ taa dịka a ga-ekpebi ikpe gbasara akụnaụba ya a sị na ọ depụtachaghị ka ọ ha taa bụ Tọzde.
Malabu: Ụlọikpe enyela iwu ka a nwuchie Adoke,Etete na ndị ọzọ
Image Copyright @officialEFCC @officialEFCC
Ụlọikpe ukwu nọ n'Abuja enyela EFCC ikike inwụchi onye bụbụ Mịnịsta na-ahụ maka ikpe bụ Mohammed Adoke, na onye bụbu mịnịsta na-ahụ maka mmanụ agbidi bụ Dan Etete maka aka n' ebubo gbasara ebubo nrụrụaka so nkwekọrịta orire mmanụ Malabu.
Ndị ọzọ o kwukwara ka a nwụchie gụnyere Raph Wetzels, Casula Roberto, Pujato Stefeno, nakwa Burrato Sebastiano.
Ndị a niile bụ ndị a na-ebo ebubo n'aka ha dị na okwu nruru aka ahụ kwesịị ịbịa ụlọikpe ụbọchị iri na asaa nke ọnwa Eprelụ mana ahụghị ụkwụ ha n'ụlọikpe.
Iwu asaa Buhari jụrụ ajụ mana Sineti binyere aka
Ụlọoomeiwu ukwu ebinyela aka n'iwu ga-eme ka a tụọ onye nkịtị ọbụla yi uwe ndị uweojii were ga ntọ mkpọrọ afọ ise mana iwu ahụ ekwughị ihe a ga-eme onye uweojii ji ike ekwesịghị ekwesị merụọ onye nkịtị ahụ maọbụ bute ọnwụ ya.
Nke yiri ibe ya, ndị ụlọomeiwu ukwu binyere aka ma wepụta iwu asaa nke Ọnyeisiala Buhari jụburu ibinye aka na ya n'ihi ihe ọ kpọọ ikerịta ọrụ dị na ngalaba gọmentị dị iche iche.
I wu ndị agụ gụnyere Iwu gbasara nchekwa mmanụ dị n'ala(PIGB), Iwu ịhazigharị ụgwọ a na-akwụ maka stampụ.(stamp duties), Iwu hiwere agụmagụ banyere njem nleta(National Institute of Hospitalism and Tourism) nakwa nke Kaụncul ga-naahụ maka nchọpụta(National Research and Innovation Council).
Iwu ndị ọzọ gụnyere nke ime ka ụlọfrrụ Inec kwụrụ onwe ya( Independent National Electoral Commission (INEC) Act 2010 (Amendment),ngalaba maka nchekwa mkpụrụ a na-akọnye n'ala( National Agricultural Seeds Council Bill) nakwa ngalaba mgbazinnye ego maka ọrụugbo ( Agricultural Credit Guarantee Scheme Fund)
Facebook adajọọla ọzọ
Ụlọọrụ Facebook gbara ama na ha gbara akara igbe ozi ihe karịrị otu ndị̄ mmadụ n'ọ n'igwe okwu ha kemgbe afọ 2016 n'anwụ na amaghị ama.
Ha kwukwara na ha na-agba mbọ ịkagbu ozi ndị a ha gbara n'anwụ na anataghị ikike ndị nwe ya.
U-17 World Cup qualifier:Niajiria kụgburu Angola
Nkenke aha onyonyo Nigeria players and team members carry head coach Emmanuel Amuneke after winning the Under-17s World Cup
Otu Golden Eaglet abụrụla otu egwu bọọlụ mbu na Africa nwetara ọnọdụ na asompi mbaụwa nke ndị akarịbeghị afọ iri na asaa dịka ha ji otu ọkpụ asataghị ihe were merie ndị Angola na asompi ha gbara Dar es Salaam ụbọchị Wenezde.
Gee akụkọ ndị a n'otu nkeji:
Minimum wage: Ọ ga-ebute 'inflation'?
'Biko mere anyị ebere hapụ ikutu ọdọ ahịa anyị'
'Oke mbụbata ahịa anyị na-eme ugbua ga-anyụ anyị anya n'ọdịnihu' - Enelamah
Enwere m ike ịchị Naịjirịa dịka onyeisiala - Basket Mouth